Dab Xoogan oo ka holcaya Gobolka Alberto ee dalka Canada (Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Dab Xoogan oo ka holcaya Gobolka Alberto ee dalka Canada (Daawo Sawirada)
Dab Xoogan ayaa ka holcaya Gobolka Alberta ee dalka Canada, iyadoo walaac badan laga muujinaayo in dabkaasi uu sii faafo, maadaama Xowli uu ku socdo.
Dabeylo deegaanka ka socda ayaa caqabad ku noqday dadaalka ay wadaan boqolaalka dab demiska ah ee aaggaasi ka howlgalaya.
Dabka ayaa dhaliyay in 80,000 oo qof laga daadgureeyo magaalada shidaalka laga qodo ee Fort McMurray, waxaana ay saraakiishu sheegayaan in ay wadaan daadgureynta kumannaan qof oo ku xanniban waqooyiga magaaladaasi.
Waxaa la rumeysan yahay in dabkaasi uu hadda gubay keymo iyo dhul baaxadooda lagu qiyaasay saddex iyo bar kun oo kilo mitir oo isku-weer ah.
Saraakiisha ayaa ka digaya in haddii aanu roob deegaankaasi ka di’in, ay dabeylaha jira dabka sii hurin karaan muddo bilooyin ah.
Mexico oo ku wareejisay Mareykanka (El Chapo)